Hurumende Yoferefeta Kambani yeMangoda yeDe Beers
Chivabvu 05, 2011
Hurumende inoti yakaumba komiti itsva ichaongorora mashandiro aiita kambani inochera mangoda yeDe Beers yekuSouth Africa, apo yaitsvagiridza kana kwaMarange kwaive nemangoda.
Gurukota remighodhi, Va Obert Mpofu, nemutevedzeri wavo, Va Gift Chimanikire, vaudza Studio7 kuti De Beers yaitora mangoda kwaMarange isingatauri chokwadi kuhurumende pamusoro pezvayaiwana payaitsvaga kana muivhu rekwaMarange rakange riine mangoda.
Kambani yeDe Beers, iyo yaiva nemvumo yekuchera mangoda kwemakore gumi kwaMarange, inonzi yaingochera munzvimbo iyi ichiti yaitsvaga mangoda anonzi kimberlite, asi akazowanikwa ndeemhando ye alluvial, kana kuti mangoda anowanikwa pamusoro kwete pasi pasi sema kimberlite.
VaMpofu vati sangano reKimberley Process nenyika dzinoita zvemangoda zvinoziva kuti De Beers yakaita mari zhinji nemangoda ekwaMarange zvisiri pamutemo.
Gwaro idzva rakanyorwa nenyanzvi dzemangoda dzakazvimirira rinotiwo De Beers, iyo yakatoramba kare kuti yakatora mangoda muZimbabwe isingaudze hurumende, yakatanga kutsvaga mangoda nguva yehurumende yeRhodesia zvinova zvinoshamisa kuti sei vasina kuwana mangoda nemichina mikuru yavaishandisa.
VaChimanikire vati hurumende ingangoendesa De Beers kumatare kana komiti yapedza kuita ongororo yayo.
Hurumende haina kuburitsa mazita evanhu vari mukomiti iyi. VaChimanikire vati hurumende iri kutarisira gwaro rekomiti iyi munguva pfupi iri kutevera nekuti mamwe magwaro anotaura pamusoro pehuwandu hwevhu rakabuditswa nezvimwe zvakadaro neDe Beers aripo nechekare.
Hatina kukwanisa kubata vatauriri veDe Beers sezvo vanga vasingadari nhare dzavo.
Asi nyanzvi mune zvematongerwe enyika, Va Charles Mangongera, vanoti chinhu chakanaka kuti chokwadi chibude asi chisingavharidziri zviri kuitikwa kwaMarange pari zvino.